ट्रम्प–किमको सिंगापुरमा वार्ता : के छ किमको एजेन्डामा ? - AJAMBARI
१ बैशाख,२०७६059
१ बैशाख,२०७६032
५ फाल्गुन,२०७५092
४ फाल्गुन,२०७५078
४ फाल्गुन,२०७५039
४ चैत्र,२०७४0621
५ चैत्र,२०७४0640
६ फाल्गुन,२०७४0484
१ बैशाख,२०७६040
४ असार,२०७५0277
५ फाल्गुन,२०७५081
५ फाल्गुन,२०७५057
५ फाल्गुन,२०७५062
७ फाल्गुन,२०७५042
७ जेठ,२०७५0319
६ जेठ,२०७५0330
५ चैत्र,२०७४0572
१ फाल्गुन,२०७४0833
ट्रम्प–किमको सिंगापुरमा वार्ता : के छ किमको एजेन्डामा ?
२ जेठ,२०७५ 257 0
दुबै देशका नेता अर्थात् अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उन भेटघाटका लागि सिंगापुर पगेका छन् ।
यदि सबैकुरा निर्धारित तालिका अनुरुप भए मंगलबारको दिन यो ऐतिहासिक भेटघाट सम्भव हुनेछ ।
अमेरिकाले भेटघाट अपघ उत्तर कोरियालाई आफ्नो परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर यसको बदलामा उत्तर कोरिया के चाहन्छ त्यो स्पष्ट हुन सकेको थिएन ।
तर अब उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनले डोनल्ड ट्रम्पसँगको आफ्नो भेटघाटको एजेन्डा केही हदसम्म स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार उनी ट्रम्पसँग ‘पूर्णतः शान्ति स्थापित गर्ने तरिका’ बारे कुराकानी गर्नेछन् ।
सिंगापुरले खर्चनेछ १ अर्ब ६१ करोड:
किमले संसारभरीको नजर यो भेटघाटमा अडिएकोसमेत बताएका छन् । यता ट्रम्पले भने उक्त भेटघाट सकारात्मक हुने महसुस भएको बताएका छन् ।
आइतबार सिंगापुर पुगेपछि दुबै नेता अलग होटलमा बसिरहेका छन् । एकतर्फ जहाँ किम सिंगापुरको पाँचतारे होटल सेन्ट रेजिसमा बसिरहेका छन् भने ट्रम्प त्योभन्दा केही परको सांग्रिला होटलमा बसिरहेका छन् ।
दुबैको भेट सेनटोसा द्वीपको कपेले होटलमा हुने निश्चित भएको छ । सिंगापुरका विदेशमन्त्री विवियन बालकृष्णनले भनेका छन्, ‘हामी निष्पक्ष, विश्वासयोग्य र सुरक्षित छौं, त्यसैले हामीलाई चुनिएको हो । मलाई लाग्छ सिंगापुरका जनताले यस वार्तामा गर्व गर्नेछन् ।’
उनका अनुसार सिंगापुर आफैले वार्ताको स्थान प्रस्ताव गरेको थिएन बरु अमेरिकीहरु आफैले सधैं भन्ने गरेका थिए ।
विश्वमै सिंगापुर एक सुरक्षित र व्यवस्थित शहरको रुपमा चिनिन्छ, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनसभालाई सुक्ष्म निगरानी गरिन्छ ।
सिंगापुर र उत्तर कोरियाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध ७० को दशकदेखि हो । तर, उत्तर कोरियाले छैठौं परमाणु परीक्षण गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको प्रतिवन्धलाई मध्यनजर गर्दै सिंगापुरले उत्तर कोरियासँग कारोबारको सम्बन्ध तोडेको थियो ।
सिंगापुर उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङ्याङ्गसँग अपेक्षाकृत निकट छ ।
सिंगापुरमा अमेरिका र उत्तर कोरिया दुवै देशका दूतावास छन् । यसको मतलव यहाँ दुवै देशबीच गोप्य सम्वादको सम्भावना पनि छ ।
यस शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि सिंगापुर नै किन उपयुक्त विकल्प भयो ? यस प्रश्नको जवाफ सिंगापुरका नेताहरुले दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ली शियन लुंगका अनुसार सिंगापुर दुवै देशका लागि राजनीतिक रुपमा स्वीकार्य छ किनकि दुवै देशसँग सिंगापुरको मित्रतापूर्ण सम्वन्ध छ । एजेन्सी
यसरी धसियो नालीमा जुम्लामा तारा एयरलाइन्सको विमान
धीरजले बनाएको ओम बिक्रम बिष्टमाथि डकुमेन्ट्री (भिडियो)
४ जेठ,२०७५0210
बोक्रासहित र उसिनेर खानैपर्ने खानेकुराहरु
३ जेठ,२०७५0280
एक सय १९ सदस्यीय टोली लिएर प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान
३ असार,२०७५0220
४ चैत्र,२०७४03247
२ फाल्गुन,२०७५0774